International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (Press Release) - လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားဆောင်ဆောင် ရွက်နေသောကွန်ယက် (၁၈) ခုပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေအပေါ် လူထုသဘောထား အမြင်ကောက်ခံ၍ အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (Press Release) - လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားဆောင်ဆောင် ရွက်နေသောကွန်ယက် (၁၈) ခုပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေအပေါ် လူထုသဘောထား အမြင်ကောက်ခံ၍ အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်
လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားဆောင်ဆောင် ရွက်နေသောကွန်ယက် (၁၈) ခုပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေအပေါ် လူထုသဘောထား အမြင်ကောက်ခံ၍ အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်
ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကော်မတီ (ACDD)
လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသော ကွန်ယက် (၁၈) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက် မှုကော်မတီ (Action Committee for Democracy Development - ACDD) သည် ၂၀၁၂ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နောက်ပိုင်းတွင် အဆင့် ဆင့်ပြဌာန်းအတည်ပြု အကောင်အထည်ဖော် ခဲ့သော ရပ်ကွက် (သို့) ကျေးရွာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပြီး စစ်တမ်းတွေ့ရှိ ချက်များအား ယနေ့နံနက်၌ ရန်ကုန်မြို့တွင် နိုင်ငံရေးပါတီဝင်များနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အရပ်ဘက် လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၊ သတင်းမီဒီယာများနှင့်တွေ့ဆုံကာ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။
အစီရင်ခံစာအား ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လနှင့်သြဂုတ်လကာလ အတွင်း ပြည်နယ်(၃) ခု၊ တိုင်းဒေသကြီး (၆) ခုအတွင်းရှိ မြို့နယ် (၇၂) မြို့နယ်မှ အမျိုးသမီး (၅၉၄) ဦးနှင့် အမျိုးသား (၁၀၄၀) ဦး၊ ပေါင်း (၁၆၃၄) ဦးတို့နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း ချက်အပေါ် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်သူများအနေနှင့် ၄င်းတို့၏ ရွေးချယ် ပိုင်ခွင့်အာဏာကို သိရှိခြင်းရှိ/မရှိ အနီးစပ်ဆုံးရှိနေသော အုပ်ချုပ်ရေးမှူးး များအား ရွေးချယ်ရာတွင် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကို အပြည့်အဝသုံးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိ စသည်တို့ပေါ် စစ်တမ်း ကောက်ယူ၍ အစီရင်ခံစာတွင် ဆန်းစစ် သုံးသပ်ဖော်ပြထားပါသည်။
ကွက်ယက်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၏ ရလဒ်များအား သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးပါတီ အစုအဖွဲ့များ၊ အရပ်ဘက်လူထု အဖွဲ့အစည်းများ၊ မီဒီယာများအားတင်ပြခြင်းမှတဆင့် လက်ရှိ (၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွင် ပြည်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို စုပေါင်းအားထုတ်ဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ACDD ကွန်ယက် ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ရဲကျော်သူမှ ပြောသည်။
"ကျွန်တော်တို့ စစ်တမ်း ကောက်ခံရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မှာ ပြည်သူတွေ၊ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ပါဝင်ပံ့ပိုးချင် လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာပါတွေ့ရှိချက်တွေက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက် တစ်စုံတစ်ရာ အကျိုးပြုနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးတွေမှာ တိုးတက်ပြောင်းလဲ မှုတွေ ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပြင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာတွေ့ရပြီး အဓိက ပုဒ်မ ၂၈၈ နဲ့ ၂၈၉ ကိုပြင်ဖို့လိုပါတယ်" ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
အစီရင်ခံစာတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌန်းခဲ့ သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် (၁/၂၀၁၂) ရက်ကွက် (သို့မဟုတ်) ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေနှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က ၎င်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် (၇/၂၀၁၂) တို့၏ အားနည်းချက်များ၊ ဒီမိုကရေစီ အခြေခံစံများနှင့် လွဲချော်နေမှုကို သုံးသပ်တင်ပြထားသည်။
"ကျွန်တော်တို့ အဓိကတွေ့ရတာကတော့ ကျေးရွာအဆင့် မှာ ပြည်သူတော်တော်များများဟာ ဥပဒေရှိမှန်းတောင်မသိ ဖြစ်နေပါတယ်။ အချို့ ဒေသတွေမှာဆိုရင်လဲ ကျေးရွာအဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ ရွေးချယ် ခန့်အပ်မှုနဲ့ သူတို့တွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေက ကျေးရွာနေ ပြည် သူတွေရဲ့သဘောနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတဲ့အပေါ် နှစ်ဖက်ကြားတင်းမာ မှုတွေ ဖြစ်တဲ့အခါတွေလဲရှိပါတယ်။ ဥပဒေတွေမှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေပြီး အကောင်အထည်ဖော်မှုပိုင်းကလည်း လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီး ရှိနေသေးတာ တွေ့ရပါတယ်" ဟု ကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင်လဲဖြစ် ကိုယ်တိုင်စစ်တမ်းကောက်ခံခဲ့သူ ကိုအောင်မြင်က ဆိုသည်။
အင်တာဗျူးအတွက် ဆက်သွယ်ရန် - ရဲကျော်သူ +၉၅ (၀)၉၄၅၂၃၃၆၃၈၀ ဇွန်ပန်း +၉၅ (၀)၉၄၄၉၀၃၄၆၅ အောင်မြင် +၉၅ (၀)၉၂၅၉၀၃၈၂၂၈ (မှတ်ချက် - ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်များသည် မြန်မာဘာသာဖြင့်သာ အင်တာဗျူးပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အင်တာဗျူးပြုလုပ်လိုသူများအတွက် ဘာသာပြန် ထားရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံစာ (မြန်မာဘာသာ) အပြည့်အစုံကို အောက်ပါဝက်ဆိုက် လိပ်စာတွင် ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။ http://www.scribd.com/doc/249394043/Report-on-Public-Opinion-on-Yard-Village-Administrative-Law-Burmese-ACDD
"One of the objectives of the survey is to contribute to the amendment of the 2008 Constitution and playarole as people and as civil society organizations. We hope the survey findings will be an asset to the efforts to amend the constitution. We have learned that if we want to improve administration at village tract level, we have to amend the 2008 Constitution, particularly articles 288 and 289", said Ye Kyaw Thu.
"A major finding in the survey is that many people don't even know that such laws exist. At times, we see tension rise between the authorities and local people when the appointed village tract administrators' performance goes against the good of the people. The laws have weaknesses and implementation of the laws needs to be improved in many ways", said Aung Myin,anetwork member and field survey team member.
Download the full report in Burmese here http://www.scribd.com/doc/249394043/Report-on-Public-Opinion-on-Yard-Village-Administrative-Law-Burmese-ACDD